သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်နှင့် ဒိန်းမတ်နိုင်ငံ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဝန်ကြီး H.E. Mr. Rasmus Helveg Petersen နှင့်အဖွဲ့တို့ ဇန်နဝါရီလ ၉ ရက်နေ့က နေပြည်တော် မှာ တွေ့ဆုံကြစဉ်
မြန်မာ့အကြွေး ဒေါ်လာ ၆ ဘီလျံခန့် ကို ပြင်သစ်အခြေစိုက် Paris Club လျော်ပစ်
မိုးဆက်တိုက်႟ြာသူဖင့် ဧရာဝတီတိုင်း ဆားကဵင်းမဵား ပဵက်စီး
Denmark forgave the debt owed by the Burmese regime so that the money can be spent on ordinary Burmese? Danish minister, I'm afraid you think very highly of those ex-generals. That money has forever gone. No money to pay you back nor do they have any money to spend on ordinary Burmese.